यस्तो छ ज्योति लाइफको अनुमानित ओपनिङ रेन्ज.... - साँचो खबरonline khabar
यस्तो छ ज्योति लाइफको अनुमानित ओपनिङ रेन्ज….
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दोस्रो बजार अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा पहिलो शेयर कारोबारको लागि रु. १३२.९४ देखि ३९८.८२ रुपैयाँसम्म ओपनिङ रेन्ज पाउने देखिएको छ ।
कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको विवरणपत्र अनुसार गत आवमा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ १३२.९४ रुपैयाँ रहेको छ । त्योअनुसार कम्पनीले पहिलो शेयर कारोबारको लागि सो बराबरको ओपनिङ रेन्ज पाउने देखिएको छ ।
नेप्सेले कुनै पनि कम्पनीको पहिलो शेयर कारोबारको लागि प्रतिशेयर नेटवर्थको विन्दुदेखि त्यसको ३ गुणा बढीसम्मको विन्दुलाई लिएर ओपनिङ रेन्ज तोक्न सक्छ । त्योअनुसार कम्पनीको पहिलो शेयर कारोबार रु. १३२ देखि ३९८ रुपैयाँको बीचबाट हुने पक्का भएको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि जारीको शेयर शुक्रबार मात्र बाँडफाँड भएको छ । गोलाप्रथाको माध्यमबाट ५ लाख ९४ हजारले आवेदकले प्रतिकित्ता रु. १०० मा १०/१० कित्ता शेयर पाएका छन् । अब त्यो शेयर नेप्सेमा सुचिकृत भएपछि कारोबारमा आउने छ ।
कम्पनीले गत फागुन २१ गतेदेखि ६६ करोड रुपैयाँको ६६ लाख कित्ता शेयर निष्काशन गरेको थियो । त्यसमा ३ लाख ३० हजार कित्ता कर्मचारीहरूलाई र अर्को ३ लाख ३० हजार कित्ता सामूहिक लागनी कोषहरूलाई छुट्टाइएको थियो । यो अनुसार सर्वसाधारणले ५९ लाख ४० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणले पाएका हुन् ।
कम्पनीको आईपीओमा १८ लाख ४२ हजार ४९६ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्योअनुसार १२ लाख ४८ हजार ४९६ जनाको हात खाली भएको छ ।